Su'aal Israel Sawir
1 sano 3 bilood ka hor #1020 by sgilmore467
Kaliya waxaa lagu rakibay Isku-xirka Israel ee FSX. Waxay ahayd mudan tahay in la soo dejiyo. Muuqaal cajiib ah. Marka aan u duulo meelaha sida Badda Galiil iyo Mt Carmel, waxay iga dhigeysaa inaan dareemo inaan ahay halkaan!
Ku socota kuwa soo saaray iyo soo dhajiyay faylkan, mahadsanid aad u badan. Waa u qalantaa bixinta.
1 sano 3 bilood ka hor #1026 by dhilpmann
Jiritaanka kalsoonida ayaa ku xiran rakibidda. Installwindows ayaa sheegaya in 2%.
Waxaan isku dayay marar badan, marna sida admin. Waxtar ma leh.
Qof kasta ayaa ku caawin kara?
1 sano 2 bilood ka hor - 1 sano 2 bilood ka hor #1031 by rikoooo
Miyaad unzip oo dhan faylasha galaan faylka?
Last edit: 1 sanad 2 bilood ka hor by rikoooo.